တောင်ငုံးရင်မည်း - ဝီကီပီးဒီးယား
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ခရာဘိမြို့၊ Khao Nor Chu Chi တွင်တွေ့ရသော တောင်ငုံးရင်မည်းအထီး
တောင်ငုံးရင်မည်း သို့မဟုတ် တောင်ငုံးရင်မဲ ("Hydrornis gurneyi") သည် အရွယ်အစား အလယ်အလတ် ရှိသော မြေလူးငှက် ဖြစ်သည်။ မလေးကျွန်းဆွယ်၌ သားပေါက်သော်လည်း၊ ကောင်ရေအများစုမှာ မြန်မာပြည်မှ ဖြစ်သည်။ ဗြိတိသျှ ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်နှင့် အပျော်တမ်း ငှက်ပညာရှင် ဂျွန် ဟင်နရီ ဂါးနီး (John Henry Gurney) (၁၈၁၉-၁၈၉၀) ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် Gurney's pitta ဟု ခေါ်တွင်သည်။ ၎င်းစားသောက်သည်များမှာ ပက်ကျိ၊ အင်းဆက်ပိုးနှင့် တီကောင်များ ဖြစ်သည်။
၃ ပစ္စက္ခ အခြေအနေ
တောင်ငုံးရင်မည်းကို အပျော်တမ်း ငှက်ပညာရှင် အလန် အောက်တေဗီယန် ဟူးမ် (Allan Octavian Hume)က ၁၈၇၅ တွင် စတင်ဖော်ပြခဲ့ပြီး၊ Pitta gurneyi ဟု သိပ္ပံအမည်တွဲ ပေးသည်။ ထိုမျိုးစိတ်မှသည် ၂၀၀၆ တွင် ထုတ်ဝေသော မော်လီကျူလာ မျိုးဗီဇ လေ့လာချက်အရ ရလဒ်ပေါ် မူတည်၍ Genus Hydrornis သို့ ပြောင်းရွှေ့လိုက်သည်။ မျိုးစု ဟိုက်ဒရော့နစ်ကို အင်္ဂလိပ် သတ္တပညာရှင် အက်ဒဝပ် ဘလစ် (Edward Blyth)က ၁၈၄၃ တွင် စတင် မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် အပျော်တမ်း ငှက်ပညာရှင် ဂျွန် ဟင်နရီ ဂါးနီးကိုသာ ဂုဏ်ပြုရန် ရွေးချယ်လိုက်ကြသည်။
ငှက်ဖိုတွင် အပြာရောင် အမောက် ရှိပြီး၊ အောက်ပိုင်းမှာ အမည်း၊ အဝါနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ခေါင်း၏ ကျန်သော အပိုင်းမှာ အမည်းရောင် ဖြစ်သည်။ အပေါ်ပိုင်းတွင် နီညိုရောင် ရှိသည်။ ငှက်မတွင် နီညိုရောင် အမောက် ရှိပြီး၊ အောက်ပိုင်းမှာ ညိုဝါရောင်နှင့် ဖြူတူတူ ရောင် ရှိသည်။ ပျမ်းမျှ ၇၃.၂ ဂရမ် လေးသည်။ အဓိကကျက်စားသည်မှာ အပူပိုင်းဒေသ ဖြစ်သည်။ နွေးသမပိုင်းဒေသ၊ ရွှံ့နွံစိမ့်တောများ၌ တွေ့ရသည်။ ကျက်စားခွင်မှာ ၂၄၀၀၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ ရှိသည်။
တောင်ငုံးရင်မည်းသည် မျိုးတုံး အန္တရာယ် ကြုံတွေ့နေရသည်။ အစက ၁၉၅၂ ကတည်းက မျိုးတုံးသွားပြီဟု ထင်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ၁၉၈၆ တွင် ပြန်လည် တွေ့ရှိသည်။ မြန်မာပြည်တောင်ပိုင်း တနင်္သာရီဒေသနှင့် ထိုင်းကျွန်းဆွယ်တွင် သစ်ပင်များ ခုတ်လှဲရာမှ သဘာဝသစ်တောများ ပျောက်ကွယ်ကုန်မှုကြောင့် ဤမျှ ရှားပါးရခြင်း ဖြစ်သည်။
၁၉၉၇ တွင် အထီးအမ ၉ စုံသာ ကောင်ရေကျန်လောက်သည်ဟု ခန့်မှန်းတွက်ချက်ကြရာ၊ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အရှားပါးဆုံး ငှက်မျိုးစိတ်ဝင် ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ ကံအားလျော်စွာ ၂၀၀၃ တွင် မြန်မာပြည်၌ ၎င်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိရာ၊ ဆိုက်လေးနေရာ တွေ့သောအခါ၊ တနေရာတည်းတွင် အများဆုံး ဖိုမ ၁၀-၁၂ စုံခန့်သည် ခဲယဉ်းစွာ အသက်ရှင်နေထိုင်နေရသည်။ သို့ဖြစ်ရာ၊ IUCN စာရင်းတွင် မျိုးတုံးလုနီးအဆင့်မှ မျိုးတုံးရန် အန္တရာယ်ကြုံနေအဆင့်သို့ ပြန်လည် လျှော့ချနိုင်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်း ၂၀၀၉ အထိ မြန်မာပြည်တွင် ထပ်မံ သုတေသနပြုသောအခါ၊ အခြား နေရာဒေသများတွင်ပါ အတော်များများ တွေ့ရှိလာရသဖြင့် တကမ္ဘာလုံးတွင် ခန့်မှန်းထားသော မူလကောင်ရေထက် သိသိသာသာ တိုးလာသည်။ သို့သော်လည်း များမကြာမီ မျိုးတုံးလုနီး အဆင့်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်ခြေ ရှိသည်။
တောင်ငုံးရင်မည်းငှက်ကို ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ငှက်ကြည့်သူများက အကြည့်ချင်ဆုံး ငှက်အဖြစ် မဲပေးထားကြသည်။"
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မျိုးတုံးလုနီး တောင်ငုံးရင်မည်းသုတေသနကို ၂၀၀၇ မှ ၂၀၁၃ အထိ ပြုလုပ်ပြီး သုံးနှစ်အကြာ ၂၀၁၆- ၁၇ တွင် ယင်းငှက်မှီခိုနေထိုင်ရာ မြေနိမ့်မြေပြန့်တောများသည် ဆီအုန်းအပါအဝင် စိုက်ပျိုးမြေချဲ့ထွင်လာမှုကြောင့် တောပြုန်းတီးကာ ၂၀၀၇ ကထက် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း ပျောက်ကွယ်သွားကြောင်း ယင်းငှက်ကို သုတေသနပြုနေသည့် FFI မှ တနင်္သာရီ ဒေသသဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး အစီအစဉ်အရ သိရသည်။  မြန်မာနှင့်ထိုင်း၌သာ တွေ့ရပြီး တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ဆွန်ဒဟတ်တောများ နှင့် မြိတ်၊ ကော့သောင်း အနီးတဝိုက်၌ နေထိုင်ကျက်စားသည်။ မြိတ်-ကော့သောင်းလမ်းရှိ မှီခိုတော တော်တော် များများ ပျက်စီးသွားရာ၊ သုတေသန ပြုလုပ်ချက်များအရ ငှက်ကောင်ရေ အတိအကျ မသိနိုင်ဘဲ ကောင်ရေ နည်းပါးနိုင်သည်ဟု အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တောရိုင်း တိရစ္ဆာန်နှင့် သစ်ပင်ပန်းမန်များ အဖွဲ့ (FFI)မှ ဆိုသည်။
↑ BirdLife International (2019). "Hydrornis gurneyi". IUCN Red List of Threatened Species 2019. IUCN. old-form url
↑ ၂.၀ ၂.၁ Hume, A.O. (1875). "Novelties: Pitta gurneyi". Stray Feathers3(4): 296–298.
↑ "Nuclear DNA from old collections of avian study skins reveals the evolutionary history of the Old World suboscines (Aves: Passeriformes)" (2006). Zoologica Scripta 35: 567–580. doi:10.1111/j.1463-6409.2006.00249.x.
↑ Blyth, Edward. "Mr Blyth's report for December meeting, 1842, with Addenda subsequently appended". Journal of the Asiatic Society of Bengal 12 (143): 925-1010 .
↑ Jobling၊ J.A. (2018)။ Key to Scientific Names in Ornithology။ Handbook of the Birds of the World Alive။ Lynx Edicions။ 15 January 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Priority contribution. The rediscovery of Gurney's Pitta Pitta gurneyi in Myanmar and an estimate of its population size based on remaining forest cover" (2005). Bird Conservation International 15 (1): 3–26. doi:10.1017/S095927090500002X. ISSN 1474-0001.
↑ မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။5February 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 31 October 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Population, distribution, habitat use and breeding of Gurney's Pitta Pitta gurneyi in Myanmar and Thailand" (2009). Bird Conservation International 19 (4): 353–366. doi:10.1017/S0959270909008612. ISSN 1474-0001.
↑ thaibirding.com: 10 Most Wanted Birds in Thailand - Number 1: Gurney's Pitta Pitta gurneyi. Retrieved 2008-MAY-23.
↑ ၁၀.၀ ၁၀.၁ မျိုးတုံးလုနီး တောင်ငုံးရင်မည်းငှက် ကျက်စားရာ မှီခိုတောများ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း ပျောက်ကွယ်ဟုဆို (in My)။7Day News (10/22/2017)။
Wikimedia Commons တွင် Hydrornis gurneyi နှင့် ပတ်သက်သော မီဒီယာ ရှိသည်။
BirdLife Species Factsheet Archived7October 2006 at the Wayback Machine.
Image at ADW Archived 18 May 2004 at the Wayback Machine.
IUCN Redlist Factsheet
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တောင်ငုံးရင်မည်း&oldid=735111" မှ ရယူရန်
မလေးကျွန်းဆွယ်တွင် တွေ့ရှိရသော ငှက်များ
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၀၉:၅၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။